Halkan Ka Akhriso Xogo Kasoo Baxaya Nuxurka Fariintii Uu Madaxwaynaha Jabuuti Usoo Direy Madaxwaynaha Somaliland | Wajaale.com
Halkan Ka Akhriso Xogo Kasoo Baxaya Nuxurka Fariintii Uu Madaxwaynaha Jabuuti Usoo Direy Madaxwaynaha Somaliland
Warar ka soo baxaya nuxurka Farriintii uu wasiirka Arrimaha gudaha Jabuuti Xasan Cumar Maxamed Burhaan soo gaadhsiiyey Madaxweyne Axmed Siilaanyo ayaa sheegaya inay ahayd Raali-galin, taasoo uu Ismaaciil Cumar Geelle ku fur-furayey cilaaqaadkii labada Dal ee xumaaday.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa la sheegay in uu ka garaabay tabashooyinkii Xukuumadda Somaliland ku go’aansatay inay yarayso xidhiidhkii labada Dal, taasoo ka dhalatay Heshiiskii Somaliland iyo shirkadda DUBAI-WORLD ay ku galeen Dekedda Berbera.Heshiiska Dekedda Berbera ayaa ku soo beegmay xilli wefti Madaxweyne Siilaanyo uu kaga qayb galay Dalka Jabuuti xafladii lagu soo casuumay ee Xorriyadda Dalkaas, taasoo Madaxweyne Siilaanyo loo qaabilay meeqaam la saluugay.
Weftiga Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dhawaan soo diray ayaa xambaarsanaa dhawr ujeeddo oo xilligan dan u ah labada Dal, balse ka yimi dhinaca Jabuuti, kuwaasoo soo noolaynaya cilaaqaadkii iyo xidhiidhkii dhawaa ee ay labada dal lahaan jireen khilaafkooda ka hor.
Wasiirka Arrimaha gudaha Jabuuti waxa uu kulamo kala duwan la yeeshay Madaxda Somaliland gaar ahaan Madaxweyne Siilaanyo, Hay’addaha Amniga iyo Garsoorka, waxaanay ka wada hadleen furdaaminta caqabado labada Dal iskaga xidhan, kuwaas oo ay ka mid yihiin in dib loo furo isu socodkii labada dal isla markaana meesha laga saaro culayskii saarnaa xuduudka u dhaxeeya labada Dal.
In dib loo bilaabo in muwaadiniinta Reer Somaliland loo sahlo isu socodkii ay dunida kale la lahaayeen ee ay marinka u ahayd Jabuuti, gaar ahaana helitaanka baasaaboorka Jabuuti iyo in dib loo cusboonaysiiyo kuwii ay hore u bixiyeen.
Qoddobka ugu culus ee weftiga Jabuuti iyo Somaliland ka wada hadleen waxa uu ahaa sidii loo so oaf-jari lahaa kiiskii dadkii qarxiyey dalka Jabuuti, kuwaas oo qaarkood-na dacwadi uga furan tahay dalka Jabuuti, kuwo kale-na lagu-ba maxkamadeeyey Somaliland, kuwaas oo ay labada dal ba ka hayaan xogo loo baahan yahay in ay is-dhaafsadaan.
Ilo wareed muhiim ah ayaa Waaheen u sheegay in Dawladda Jabuuti doonayso inay soo af-jarto Dacwada dadkii loo hayey qaraxii Jabuuti ka dhacay sadex sano, kaasoo ay xukuumadda Somaliland u gacan galisay qaar ka mid ah Eedaysanayaasha loo haysto oo lagu qabtay Somaliland.
Warku waxa uu sheegayaa in dhawaan Dacwadaasi ay guda gali doonto Maxkamadda Jabuuti, isla markaana maxbuus muhiim u ah Dacwadaas oo Somaliland ku xidhan loo gudbin doono xabsi ku yaala xuduudka labada Dal, si su’aalo loogu weydiiyo, maadaama ay Somaliland diiday in loo gacan galiyo mar kale Dalkaasi.
Maxaabiistii hore Somaliland ugu gacan galisay Dalka Jabuuti ayey labada Dal ku Heshiiyeen in dib loogu soo celiyo Somaliland marka la xukumo, hase yeeshee waxa caqabad ku noqotay xukunkooda maxaabiista Somaliland ku xidhan ee kiiskaas loo haysto oo ay Somaliland xukuno ku riday, kuwaas oo qaarkood xukunkii ka dhamaaday, halka Jabuuti ay wali la rafanayso kuwa ay hayso.
Wakiilka Somaliland ee loo magacaabay Dalka Jabuuti ayaa shalay safarkiisii ugu horeeyey ku tagay Dalka Jabuuti si uu hawlihiisii u bilaabo, waxaana safarkiisa lala xidhiidhinayaa in uu sii ambaqaado sidii loo wanaajin lahaa xidhiidhka labada dal.
Ambassador C/fataax Siciid Axmed waxa la filayaa in uu si dhakhso u gudo galo sidii uu xukuumadda Jabuuti ugala shaqayn lahaa soo celinta xidhiidhkii wanaagsanaa ee labada dal, iyadoo la filayo inay wufuud labada dal ka socotaa u kala gooshi doonto labada Dal, si loo fuliyo qoddobadda lagu Heshiiyey.